सिन्धुली नेकपा स्थानीय कमिटीको एकीकरण र अबको बाटो ! | Sindhuli Saugat
सिन्धुली नेकपा स्थानीय कमिटीको एकीकरण र अबको बाटो !
युबराज बम २०७५ असोज २९ गते सोमवार विचार
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सिन्धुलीले ९ वटै स्थानीय तहमा पार्टी संयन्त्र गठन गरेको छ । स्थानीय कमिटी एकिकरणसँगै जिल्ला कमिटीको निर्माण, दुई दलको एकिकरण पछि बनेको संयुक्त पार्टीका नेताहरुबिचको सम्बन्ध, गुट–उपगुट, कमिटी संचालन प्रणालि लगायत पार्टीको भावि योजनाकाबारेमा स्थानिय कार्यकर्ता र सर्वसाधरणले नजिकबाट निहालिरहेका छन् । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकिकरण पछि पार्टीको संरचना निर्माण र व्यवस्थापन झनै पेचिलो बनेको छ । नेकपा सिन्धुलीका केहि राष्ट्रिय स्तरका नेताहरुले आफू अनुकूलको कार्यकर्तालाई पदमा बसाएर आफ्नो स्वार्थ पुरा गरेको थुप्रै आरोपहरु लाग्दै आएको छ । जनप्रतिनिधि र राजनैतिक दलका नेताहरु जनताको प्रतिनिधि नभएर कार्यकर्ताको प्रतिनिधि हुन पुगेका छन् । सामाजिक तथा नैतिक आचरणलाई लत्याएर आत्मकेन्द्रित र व्यक्तिवादी कार्यशैलि हाबि हुँदा प्रतिभाशालि कार्यकर्ताहरु सिर्फ कार्यकर्तामा नै सिमित हुनुपरेको अवस्था छ । देशको शक्तिशाली एवं बहुमतको सरकार सम्हालेको पार्टीमा स्थानीय स्तरमै आन्तरिक कलह र विवादले ठुलो स्थान ओघटिरहेको छ । सिन्धुली जिल्लाका स्थानीय तहमा नेकपाले छनौट गरेको पदाधिकारीप्रति नेकपाकै नेता तथा कार्यकर्ता असन्तुष्ट छन् । नेकपा सिन्धुलीको ९ वटै स्थानीय तहमा कमिटी गठन गरि पद बाँडफाँड भइसकेको छ । स्थानीय कमिटिको निर्माण र सिफारिश सहमतिमा गरेपनि स्थानीय नेताहरुबिच असन्तुष्टि चुलिदैँ गएको छ । स्थानीय तहको चुनावमा अन्तरघात, पार्टी एकिकरणपछिको पद बाँडफाँट, आत्म केन्द्रित चिन्तन, स्वार्थ, गुट, अपारदर्शी र नेताहरुमा देखिएको अवगुणले नेकपा सिन्धुलीको सामूहिकतामा ह्रास आएको छ ।
नेकपा सिन्धुलीका केही नेताहरुले केन्द्रमा राजनिति गर्दै आएको थुप्रै भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं नेकपाका केन्द्रिय सदस्य हरिबोल गजुरेल सिन्धुलीबाटै निर्वाचित भएर कृषि मन्त्री बनिसकेका छन् । उनी संविधानसभाको दोश्रो चुनाव र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा निर्वाचित भएका हुन् । नेकपा सिन्धुलीको पार्टी संरचनाको निर्माण र संचालनमा उनले महत्वपुर्ण योग्दान दिनुपर्ने हो । तर, जिल्लामा आत्मकेन्द्रित कार्यशैलिलाई उनलेनै बढावा दिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । शक्तिको पहुँचमा उनले कृषिमन्त्री हुँदा कृषकलाई सहुलियतको लागि भनेर आएको ४० हजार रुपैँया वास्तविक किसानले नभई आफ्ना कार्यकर्तालाई वितरण गरेको घट्नाहरुले पनि गजुरेल व्यक्तिवादी चिन्तनमा अडिक भएको सहजै भन्न सकिन्छ । २०६५ साल पछि उनले जिल्लाबाट ठुलो संख्यामा पार्टीमा आफ्ना कार्यकर्ता भित्र्यायाएको सत्य कसैको अघि लुकेको छैन । गजुरेलले पार्टीमा आफ्नो गुटको कार्यकर्ता भित्राएर राजनितिक संरक्षण खोज्न सक्रिय रहेको देखिन्छ । आफ्नो राजनैतिक संरक्षण र समर्थनकालागि कार्यकर्ता ओसोर्न गजुरेल खप्पिस भएकाले पनि सिन्धुलीको स्थानीय कमिटीमा उनकै कार्यकर्ता छनौट भए भन्दा फरक नपर्ला । वर्ग संघर्षका आदर्श, मूल्यमान्यता, इमान्दारी र अनुशासनबाट च्युत हुँदा सहिद परिवार, बेपत्ता योद्धा परिवार, घाइते, अपांग योद्धाहरू, शोषितपीडित उत्पीडित जनताको सपना अधुरै रहेको घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको छ । सिन्धुलीको स्थानीय कमिटिमा पदाधिकारी छनौट प्रक्रियामा देखिएको आत्मकेन्द्रित र व्यक्तिवादी सोच हाबि हुँदा ‘गर्ने भन्ने हनुमान पगरी गुथ्ने ढेडु’ जस्तै भएको छ ।
कमिटीमा महिलाको सहभागिता नुहुनु र जिल्लाका शिर्ष नेताहरुको आसेपासे पदाधिकारी बन्नु गलत हो । पदाधिकारी छनौट प्रक्रियामा देखिएको व्यक्तिवादि चिन्तनबाट पार्टीले सामन्तवादलाई श्रेय नदिएको भन्ने ठाउँ छैन । पंक्तिकारले जिल्लामा गजुरेललाई मात्र नेकपाको नेता देखेको छैन । तर, उनी नेकपाबाट केन्द्रमा पहुँच पुगेका नेतामा गन्निछन् । यो अवस्थामा कृषिमन्त्री बनिसकेका र केन्द्रसम्म पहुँच भएका गजुरेलले सिन्धुलीमा पार्टी सुदृढिकरणकालागि अघि बढ्न जरुरी छ र व्यक्तिवादी चिन्तनलाई त्याग्नुपर्छ ।
जिल्लाका स्थानीय तहहरुमा नेकपाको वर्चश्व छ । प्रतिपक्षि दल काँग्रेस पनि कमजोर देखिएको छ, । जिल्लामा जनप्रतिनिधिले अघि बढाएका योजना लगायत उनीहरुको कदममा प्रतिपक्षि दल सक्रिय भएर निगरानि गर्न सकिरहेका छैन । यस्तो अवस्थामा पार्टीको कमिटीमा आफ्ना कार्यकर्तालई भित्राएर समग्र जिल्लामा सामन्तवादलाई श्रेय दिने तत्वहरु बढिरहेका छन् । तसर्थ, नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरु मात्र नभएर प्रतिपक्षि दल र जिल्लाका सरोकारवाल निकायहरु सजग भएर समाजमा देखिएको विकृति र विसंगतिको चिरफार गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । त्यसैगरि, आफ्ना कार्यकर्तालाई विभिन्न निकायमा भर्ना गर्ने जिल्लाका शिर्ष नेताहरुको गल्ति ढाकछोप गर्ने रणनितिलाई बेलैमा सबैले बुझ्न जरुरी छ । जिल्लाको समग्र विकासमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले महत्वपुर्ण योग्दान दिनुपर्छ र व्यक्तिवादी चिन्तनलाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।
पछिल्लाे - २०७५ असोज २९ सोमबारको राशिफल
अघिल्लाे - सुन तस्करीका मुख्य अभियुक्त दुबईमा पक्राउ